iHome ဓါတ်ဗူးများ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်း>မီးဖိုချောင်သုံး>ဓါတ်ဗူး
ကုန်ပစ္စည်း 28 ခု ရှိပါသည်
Classic Vaccum Flask
Classic Vaccum Flask Model No. 301
Classic Vaccum Flask Model No . 311
Classic Vaccum Flask Model No . 801
Classic Vaccum Flask Model No . 511
RANG DANG Vaccum Flask RD-0538 N1 RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
Classic Vaccum Flask Model No . 811
Classic Vaccum Flask Model No . 812
RANG DANG Vaccum Flask RD-1045 N1E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1040 RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1040 ST2 RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-2035 N1E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1045 TSE RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1055 TS RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-2035 N10 E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1055 ST 1E RANG DANGတံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-3245 N1E တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့ စိတ်ကျေနပ်မှု...
RANG DANG Vaccum Flask RD-1045 ST 1E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-2045 ST 1E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
RANG DANG Vaccum Flask RD-2545 ST 1E RANG DANG တံဆိပ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ရေနွေးဓာတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါသည် ။ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး သေသပ်လှပစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံတိပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အပူကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်သူများအဖို့...
Tiger အမှတ်တံဆိပ် ဓာတ်ဘူး
Insulated Water Steel Bottle